Izinhlelo Zokugoma Izifo Zezimbuzi
Izimbuzi zingagonywa ngezigaba ezihlukahlukene kulo lonke ukuthuthukiswa kwazo ukuvikela izifo nezifo. Funda imiyalo bese ulandela izincomo zomkhiqizi wemithi. Khokha ngokukhethekile uma usebenzisa imishanguzo ezimbuzi ezikhulelwe.
Imithi yegciwane kanye nokuphathwa kwezifo zezimbuzi kufanele isetshenziswe ngokulandela imiyalelo ephepheni. Uma inqubo efanele ingalandelwa, imithi ingase ingasebenzi.
Qinisekisa ukuthi imithi iqondene nokusetshenziswa kwezimbuzi hhayi, isibonelo, izinkukhu.
Qinisekisa ukuthi isilwane sithola isilinganiso esifanele somuthi. Umthamo ungancunywa ngobukhulu nesisindo sembuzi.
Ukuze uphumelele, imithi ethile ingadinga ukunikezwa okungaphezu kwesisodwa, kuyilapho ezinye zidinga ukusetshenziselwa kanye kuphela.
Imithi ehlukene nayo idinga ukuphathwa ngezindlela ezahlukene - ukugcoba (ngomlomo), ngokujola ngaphansi kwesikhumba noma kumisipha, ngokufaka isicelo endaweni encane, ngokuthulula isikhumba noma ngokufaka isilwane. Qinisekisa ukuthi imithi ilawulwa ngendlela efanele.
Hlola usuku lokuphela komuthi. Uma umuthi usuphelile usuku lokuphelelwa yisikhathi kungase kungasebenzi.
Gcina imithi endaweni epholile engenakuthola izingane noma izilwane.
Sebenzisa isiraphu elahlwayo kanye nenaliti kanye kuphela, bese ubalahla ngesiphuzo esibandayo esingenalutho.
Uma igcwele, cela isazi sezempilo sezilwane ukuze usiqede ukuze usiqede.
Ungasebenzisi inaliti efanayo ezilwaneni ezahlukene.
Ukuze imithi iphumelele, kufanele isakaze emzimbeni wembuzi futhi ibe khona emanzini omzimba, kuhlanganise ubisi. Funda imiyalelo yokunquma ukuthi zingaki izinsuku okumelwe ulinde ngaphambi kokuba uhlabe isilwane inyama noma usebenzise ubisi lwawo.
Uhlelo Lokugoma Izifo Zamazinyane Ezimbuzi
Uhlelo olulandelayo kufanele lubonwe njengesiqondiso kuphela. Xhumana nodokotela wezilwane uhlelo oluthile lokugoma izimbuzi zakho.
Izingane - zingakapheli isonto lokuqala lokuphila: goma ngamanzi enhliziyo (thintana nodokotela wezilwane wangakini).
Izingane - kusuka emavikini amabili ubudala: zigoma ngokumelene ne-Pasteurella. Goma kabili, amaviki amane ngaphandle.
Izingane - ngaphambi kokulinda (ezinyangeni ezimbili kuya kwezingu-5 ubudala): goma ngezinso ze-pulpy, i-Pasteurella nekota yangemuva.
Izingane - ezinyangeni ezingu-6 ubudala: zigoma ngokumelene ne-bluetongue (imithi emithathu, ngaphandle kwamasonto amathathu), i-pulpy kidney, i-quarter black, i-anthrax.
Uhlelo Lokugoma Izifo Kuzimbuzi Zenduna Nensikazi
Ngo-Ephreli kuya kuMeyi: goma igciwane elidala lembuzi kanye nezimpongo (okwenzayo nezinqama) ngokumelene nePasteurella.
Spring (Agasti - Septemba eNingizimu Afrika): ukugoma kanye nezinqama ngokumelene ne-bluetongue. Lokhu kufanele kwenziwe amasonto ayisishiyagalolunye ngaphambi kokubeletha kodwa kulandela ukuzalanisa izinqama. Nge-bluetongue, umthamo imishanguzo emithathu, amaviki amathathu ngaphandle.
Ngo-Agasti - Septemba eNingizimu Afrika: igoma ngezinsolo ze-pulpy, ikota elimnyama (amasonto amane ngaphambi kokugqoka ama-Angora) kanye ne-anthrax (amasonto amane ngaphambi kokugqoka ama-Angora).
Ingabe - ngaphambi kwesikhathi sokubeletha: ugomela ngokukhipha isisu okubangelwa yi-Chlamydia (amasonto amane kuya kwangu-6 ngaphambi kokubeletha).
Ngabe - ngaphambi kwesikhathi senkathi yokugoma: goma ngesilonda esibhakabhaka (amaviki ayisithupha kuya kwangu-8 namasonto amabili kuya kwangu-4 ngaphambi kokubamba)
Futhi goma nge-tetanus (amasonto angu-6 kuya kwangu-8 namasonto amabili kuya kwangu-4 ngaphambi kokubamba) noma i-orf (amasonto amane ngaphambi kokubanjwa, uma kubonisiwe).
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ulwazi lunikeza izinjongo zemfundo nolwazi kuphela futhi angeke lithathwe njengeseluleko sezokwelapha. Ulwazi aluhloselwe ukufaka iseluleko sezokwelapha noma ukwelashwa okuhlinzekwa ngudokotela wakho wezilwane.